Iprofayile yeNkampani-UHEBEI WOKUTHENGA NGAPHANTSI KUNYE NOKUTHUNYELWA KWENKQUBO, LTD
Zonke iimveliso zethu zivunyiwe ngezatifikethi ze-CE, ISO, FDA ngokwahlukeneyo.
Iimveliso zethu eziphambili zibandakanya oku kulandelayo:
Isirinji elahlwayo: Isirinji ezalisiweyo, inaliti ye-hypodermic, iseti yokumnika, iseti yentloko yomthambo, IV cannula, igazi lancet, isikhumba, ityhubhu yokuqokelela igazi, iingxowa zegazi, iingxowa zomchamo.
Iiglavu ezilahlwayo: ezifana iiglavu latex, iiglavu zilahlwe, iiglavu IVinyl kunye PE iiglavu.
Ezilahlwayo iimveliso non-ephothiweyo: ezinje ngesigqubuthelo sobuso, isiciko sezihlangu, iminqwazi yeMob, iminqwazi yeBouffant, iminqwazi yoqhaqho, ingubo, idrape, iiphedi zebhedi, phantsi kweephedi, imikhono njl.
Ukunxiba kwezonyango: kubandakanya i-bandage enamathelayo, ii-bandage ezibambeneyo, i-PE, iiteyiphu ezingalukanga kunye neZinc oxide, udaka lwenxeba, udaka njl.
Unyango lokubuyisela kwimo yesiqhelo: ezinje ngesitulo esinamavili sombane, isitulo esinamavili seviliyiki, isitulo esinamavili, isitulo esinamavili, ukuhamba ngenqwelomoya, inqwelo yokuhamba, ikratshi nenduku njlnjl.
Izixhobo zovavanyo lokuchonga: njengovavanyo lokukhulelwa, uvavanyo lwe-ovulation, i-HIV, i-HAV, i-HCV, iMalariya, i-H-pylori, njl.
Ikhithi yamazinyo: kubandakanya isirinji yamazinyo, ikheshi yokunyusa amathe, i-forceps ephela kabini, iphenyo yamazinyo ephela kabini, i-stomatoscope njl.
Iimveliso zesini: ezinjenge-speculum yelungu lobufazi, i-swab, i-urinary swab, i-cervix brush plush, i-spoon yomlomo wesibeleko, i-rambrush yomlomo wesibeleko, i-endometrial suction curette, i-spatula yomlomo wesibeleko, i-spatula yeplanga, iikiti zesini.
Iimveliso ezibulala iintlungu
Iimveliso zekhemesti: ezifana nokujonga uxinzelelo lwegazi, imitha yeGlucose, ibunzi kunye ne-thermoeter yedijithali, iOffmtip oxymeter, isixhobo sokuhambisa isepha esizenzekelayo.
Ukuba lishishini elihle lokuba bonke abathengi bathembele kunye nabasebenzi bathande!
Ukunceda abasebenzi bakhule kwaye basebenze kunye ukudala ubuqaqawuli!
Ukuziphatha: impilo, ukuzithemba, ukuthembeka, ukwabelana, ukubulela! Isenzo: ubuchule, ukusebenza ngokukuko, ukusebenzisana, ukuthanda, kunye nokuphumelela!